Mogadishu Journal » 2022 » June » 17
//June 17, 2022
Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha JFS u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha oo kulan la qaatay danjirtada Canada u fadhiya Nairobi. Xubnaha safaaradda Kanada oo uu hoggaaminaayay Xoghayaha koowaad ee ayaa warbixin ka siiyay Ergayga howlaha horumarinta iyo gargaarka isugu jira...
Qiimeyn uu sameeyey Bogga Global firepower oo soo saara liiska awoodda militeriga ee dalalka caalamka ayaa daabacay warbixintisii sanadlaha aheyd. Sida caadiga ahayd, xagga sare ee liiskan, saddexda dal ee ugu awoodda badan militeriga adduunka waa Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha...
Ra’iisul Wasaaraha magacaaban ee XFS Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa booqasho iyo salaan ugu tagay Ra’iisul Wasaaraha xukuunadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble . Rooble ayaana Ra’iisul Wasaaraha cusub ee magacaaban Xamsa Barre u rajeeyay in Eebbe la garab galo mas’uuliyadda...
Waxaa degan xaalada degaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud oo saaka aroortii ay Al-Shabaab ku qaaday weerar qaraxyo ku bilowday. Maleeshiyo ka tirsan degaanka ayaa la sheegay iney iska caabin adag kala hortageen kooxda Al-Shabaab oo sida la sheegay qorshohoodu ahaa iney qabsadaan...